युरो २०१६- अन्तिम १६ को रोमाञ्चक समीकरण तयार - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / FOOTBALL / युरो २०१६- अन्तिम १६ को रोमाञ्चक समीकरण तयार
युरो २०१६- अन्तिम १६ को रोमाञ्चक समीकरण तयार
By Digital Khabar on June 23, 2016
असार ९, २०७३- युरो २०१६ बुधबारयता अन्तिम १६ मा झरेको छ । लिग चरणका खेलपछि अब प्रतियोगिता नकआउटतर्फ मोडिएको छ । लिग चरणका खेल १३ दिन चले, ३६ खेल भए, ६९ गोल भए । मैदानमा खासै ठूलो समस्या देखिएन । जति पनि समस्या रहे, ती मैदान बाहिर रहे, विशेषत: टिमका समर्थकहरूको उपद्रो । अहिलेसम्मको प्रतियोगिताको सबैभन्दा ठूलो समाचार रहेको छ, नकआउट चरणमा आइसल्यान्डको छनोट ।
अस्ट्रियालाई २–१ ले हराएर आइसल्यान्डले यो उपलब्धी हात पारेको हो । विश्वास नहुन सक्छ, आइसल्यान्डको जनसंख्या खालि तीन लाख ३० हजार मात्र छ । त्यसमध्ये आठ प्रतिशत जनता अहिले फ्रान्समै छन् । आइसल्यान्ड मात्र होइन, यसपल्टको युरोमा अरु साना टिमका लागि पनि उत्तिकै फलदायी भएको छ । उत्तरी आयरल्यान्ड, वेल्स, हंगेरी र आयरल्यान्ड जनसंख्या तथा क्षेत्रफलका आधारमा साना देश हुन् ।
तर ती सबै पनि नकआउट चरण पुगे । केही ठूला टिमका लागि भने यसपल्टको युरो वास्तवमै खराव रह्यो । जस्तो, रोमानिया, रुस, युक्रेन, चेक गणतन्त्र र स्विडेन । अन्तिम १६ मा को कोसँग भिड्ने छन् त ? शनिबार तीन प्रि–क्वाटरफाइनल खेल हुनेछन्, स्विटजरल्यान्डविरुद्ध पोल्यान्ड, वेल्सविरुद्ध उत्तरी आयरल्यान्ड, अनि क्रोएसियाविरुद्ध पोर्चुगल ।
आइतबार पनि तीन खेल रहेको छ, फ्रान्सविरुद्ध उत्तरी आयरल्यान्ड, जर्मनीविरुद्ध स्लोभाकिया र हंगेरीविरुद्ध बेल्जियम । सोमबार अन्तिम १६ का दुई खेल रहेका छन्, इटालीविरुद्ध स्पेन, इङल्यानडविरुद्ध आइसल्यान्ड । यो चरणको सबैभन्दा ठूलो खेल रहेको छ, इटलाीविरुद्ध स्पेन । यिनै दुई टिम पछिल्लो युरोको फाइनलमा पनि भिडेका थिए ।
युरो २०१६ छनोट:…
विश्वकपमा अब कति टिम ?
धेरै कमाउनेमा मेसी…
Related ItemsBusinessdigital khabarEuro 2016FootballGameInternationalNationalNepalNewsPoliticsWorld
← Previous Story लियोनेल मेसीले बनाए अर्को रेकर्ड
Next Story → अर्जेन्टिना फेरि निराश, कोपा अमेरिकाको उपाधि चिलीलाइ